Etu esi enwe mmasi na-emetụta ndị ahịa Forex - Mụta ahia 2
Etu esi akwụ ụgwọ na-emetụta ndị ahịa Forex
Ndị ahịa Forex kwesịrị ịkwado banyere ọnụego ọmụrụ nwa? Eeh.
Dịka, ọnụego ọmụrụ nwa dị elu na-abawanye uru ego mba na mba ndị na-enye ọnụego ọmụrụ nwa dị ala. Ọnụ ego ọmụrụ nwa nke ego nwere ike ịbụ ihe kachasị dị mkpa na-ekpebi uru ego ahụ chere.
Mmetụta ọmụrụ nwa na-emetụta ahịa azụmaahịa n'ụzọ dị mkpa. Enwere ike ịme mgbanwe ndị a site na otu n'ime etiti etiti etiti mba ụwa. Mgbanwe ndị ahụ na-emetụta ozugbo na ndị na-azụ ahịa ahịa na ya mere ịghọta otú esi eme yana ịkọ ihe ndị a ga-eso n'etiti usoro mbụ iji nweta uru dị elu.
Ebumnuche nke Mmasị Mmasị
Maka ndị na-ere ahịa ụbọchị, ọnụego ọmụrụ nwa n'ahịa ahịa dị ezigbo mkpa n'ihi na, site na nloghachi dị elu, enwere ọmụrụ nwa na ego etinye ego, nke sụgharịrị gaa uru dị elu. Agbanyeghị, mgbanwe ahịa bụ naanị ihe egwu ma nwee ike igbochi ụgwọ ọrụ na-eweta mmasị.
Etu esi agụta ọnụego
Ọtụtụ mgbe, etiti etiti na-akwụ ụgwọ iji chịkwaa onu oriri yana belata ọnụego iji gbalịa ịgbazinye ego ma hapụ ego ahụ na akụnụba obodo. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịgwa ụlọ akụ ihe ọ bụla nwere ike ikpebi site na inyocha ihe ngosi dị oke mkpa dịka ọkwa ọrụ, ọnụahịa ọnụahịa ndị ahịa (CPI), ahịa ahịa, mmefu ndị ahịa, na ụlọ ụlọ.
Ike nke metụtara, yana adịghị ike nke ndị na-egosi ihe ndị a, na-enye naanị nchịkọta dị mma nke ike akụ na ụba. Ka ndị na-egosi ya na-akawanye mma, akụnụba ga-eme ọfụma, a ga-ebulite ọnụego ma ọ bụ debe ya otu ma ọ bụrụ na mmelite ahụ adị obere
E wezụga nke ahụ, ọ ga-ekwe omume ịkọ mkpebi ọnụego site na nyocha amụma na ilele ọkwa ndị dị mkpa.
Isi ọkwa mgbe ndị ahịa nwere ike ịgbaso nke ọma bụ ndị na-atụ anya na Federal Reserve bulie ọnụego ọmụrụ nwa, yabụ nwee mkparịta ụka dị mkpirikpi.
Inyocha amụma bụkwa ụzọ esi ebu amụma mkpebi ọmụrụ nwa, yana nihi atụmanya ha, ụlọ akụ, ụlọ ọrụ azụmaahịa, yana ndị ahịa azụmaahịa, nwere ọnụego nkwenye.
Ọnụ ego dị ịtụnanya na-eme mgbe ụfọdụ
Ndị na-azụ ahịa nwere ike ịme nyocha kachasị, mana oge ụfọdụ ụlọ akụ etiti nwere ike ịnwe ọnụego ịtụnanya ma ọ bụ ibugo onu. Ya mere, mgbe ọ bụla ụdị ihe ahụ mere, onye na-azụ ahịa kwesịrị ịmara ma ghọta ntuziaka ịgbaso.
N'oge njem, ego na-enwe ekele pụtara na azụmaahịa nwere ike ịzụta, ma enwere ịbelata, ndị ahịa nwere ike ree wee zụta ego ndị ahụ nwere oke ọmụrụ nwa.
Mgbe ịchisịrị usoro ahịa ahụ, ọ dị mkpa ime ihe ngwa ngwa dịka ọsọ dị oke mkpa mgbe ihe ijuanya kụrụ, yana site na ịme nke a, enwere ike nweta uru kachasị. Ọzọkwa, ọ dị mma ile anya maka mgbanwe na-agbanwe agbanwe.
Otu ihe doro anya, ego ahụ adịghị mkpa ma ọ bụ na-eme ka ntụzịaka ahụ dị mkpa, mana site na ibelata ọmụrụ nwa ma ọ bụ ọnụego, ahịa na-agbanwe agbanwe - nyocha dị mkpa mgbe niile tupu azụmaahịa ọ bụla.
Mgbe ụlọ akụ kpebiri amụma ego ha, ọnụọgụ ego na-agagharị, yana mgbe ha na-agagharị, ndị ahịa na-enweta ohere iji nweta uru kachasị. Ya mere, ọ nweghị nsogbu ọ bụla maka ndị ahịa iji nyochaa omume ụlọ akụ etiti ma soro nkwupụta akụkọ. Nzaghachi na ọnụego ịtụnanya na-eme ọsọ ga-eme ka ohere onye ahịa ahụ nwee nnukwu uru.
Emelitere ikpeazụ: October 5th, 2019